कानुन छ, कार्यान्वयन छैन – Chitwan Post
राज्यसञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न संसारका सबै मुलुकले आफ्नो देशको सबै खाले अवस्थालाई हेरेर देशको लागि मूल कानुन बनाउँछन् र मूल कानुनसँग नबाझिने गरी अन्य कानुन, ऐन र नियमहरु बनाउँछन् । मूल कानुन भनेको संविधान हो । दुनियाँका देशहरुमा अपवादलाई छाडेर संविधान निर्माण गरिएको छ । संविधान र कानुनको अर्थ सबैलाई मान्य हुने नियम हो । तोकिएको नियम सबैले पालना गर्नुपर्छ । कसैले मान्ने वा नमान्ने भन्ने अवस्था रहन्न । कानुनको परिधि नाघ्ने काम कसैले गर्न पाउन्न । जसले कानुन उल्लङ्घन गर्छ वा कानुनलाई नटेर्ने अवस्थामा पुग्छ उसलाई प्रचलित ऐन कानुनअनुसार सजाय हुन्छ ।
पशुपति शर्मा नाम गरेका एउटा भाइले गीतमार्फत “लुट्न सके लुट् कान्छा, लुट्न सके लुट्” भने । तिनले यसो भनेर अहिलेको सरकारलाई मात्रै आर्थिक भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कार्बाही गर्न नसकेको भनेका होइनन्, यो देशमा अन्य शीर्षकमा पनि भ्रष्टाचारहरु धेरै अघिदेखि भएको तर कानुनी कारबाही हुन नसकेको संकेत गरेका हुन् । सरकारी पदको सुब्बाले थोरै समयमै कसरी करोड मूल्यको घर बनाउन सक्यो ? बिनाआर्थिक भ्रष्टाचार यो कसरी सम्भव भयो ? उनको प्रश्नमात्रै थियो त्यो । कुनै एक नागरिकको आम्दानीको भरपर्दो स्रोत कतै देखिन्न । कामधन्धा, जागिर कतै छैन । रातारात करोडौँको सम्पत्ति कहाँबाट आयो, यो अवस्थालाई ती शर्मा पशुपतिले संकेत गरेका थिए । आम्दानीको स्रोत खुलाउन नसक्ने अवस्थामा जम्मा गरिएको करोडौँको सम्पत्ति कतै न कतै, कुनै न कुनै शीर्षकमा गरिएको भ्रष्टाचार हो । यो खालको भ्रष्टाचारको अर्थ यहाँनेर कानुन तोडिएको छ, कानुनको मर्मलाई जबर्जस्ती पेलिएको छ भन्न खोजिएको हो । घुमाउरो पारामा यसरी भ्रष्टाचार भएको छ र यो खालको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशमात्रै थियो त्यो ।
कानुन निर्माणको अर्थ कागजमा गुटुमुटु पारेर राख्न होइन, व्यवहारमा उतार्नका लागि हो । अब कर नतिर्नेलाई, अख्तियार दुरूपयोग गर्नेलाई, मिसावट गर्नेलाई, अकुत सम्पत्ति थुपार्नेलाई, सबै खाले ती जसले कानुनविपरीत काम गर्छन् तिनलाई नेपालको मौजुदा कानुनबमोजिम निम्ठै कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । यदि अब पनि कानुन तोड्ने अपराधीहरुलाई छाडा छाडिन्छ, फोकटमा उन्मुक्ति दिइन्छ भने यो देश कहिल्यै पनि उँभो लाग्ने छैन, सधैँभरि अविकसित देशको रुपमा रहिरहन्छ । देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान कानुनी राजको स्थापना गर्नुपर्छ । कमजोरलाई कानुनले छुने र बलियादेखि कानुनै भाग्नुपर्ने अवस्था राखुन्जेल देश यत्तिकै ख्याउटे रहन्छ । यो अवस्थाको अन्त्यको फर्मुला भनेको सरकारले दह्रो कदम चाल्नु त हो नै, नागरिकहरु समेत सबै खाले आर्थिक भ्रष्टाचारको विरूद्धमा उभिनुपर्छ, कानुन पालनाका लागिसमेत तयार हुनुपर्छ ।
शालिकराम मृत्यु प्रकरण : छानबिनमा प्रहरीको उच्च सतर्कता, मध्यरातमा छुटे होटल सञ्चालक